FOKO: Manao zavatra betsaka ho an’ny fiarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2018 19:04 GMT
Na dia maro tamin'ireo mpikambana ao amin'ny FOKO aza no nanomboka nianatra (any amin'ny Oniversite), feno hetsika ny volana Aprily ho an'ny FOKO Blog Club. Joan Razafimaharo mamintina ny sasany amin'ireo hetsiky ny vondrom-piarahamonina izay andraisan'ireo bilaogeran'ny FOKO anjara.
Niomana hiaraka eo anoloan'ny TLC ao an-tokontanin'ny oniversite Barikadimy ao Toamasina ireo mpikambana ao amin'ny “Foko Blog Club” sy ny ESSVA ary nanana fotoana nahafinaritra izy ireo. Nandefa lahatsary (etsy ambony) i Patrick izay ahitantsika ireo mpandray anjara mankafy ny fotoana.
Saingy nisy loza nitranga nanaloka ny dian'izy ireo. Namoy ny ainy tampoka noho ny loza nitranga tao amoron-dranomasina Tahiti Kely nandritra ny fijanonany tany Toamasina i Frédéric Tsiatosika Rakotondrajao (21 taona), mpianatra ao amin'ny ESSVAcomm. Randy manoratra hoe:
Tao Toamasina, teny amoron-dranomasina izany hoy i Miou-Miou, raha nilomano niaraka tamin'ireo mpiara-mianatra taminy nandritra ny dia fianarana izy. Nivadika ny onjan-dranomasina. Ary namoy ny ainy tamin'izany i Frederick.
Nanohy nanoritsoritra ny tsy fisian'ny fitaovana sy ny sambo fanavotana izy, izay mety ho afaka nanavotra azy.
Atrikasa Media vaovao ho an'ny mpanao gazety Malagasy ao amin'ny APC – Sary avy amin'i Tahina
Tamin'ny 24 Aprily, notontosaina tao amin'ny Foiben'ny Gazety Amerikana ny atrikasa momba ny media vaovao. Heri Zo, niara-niasa tamin'ny FOKO teo aloha no nitarika ny atrikasa, ary nampian'ny ekipan'ny Telomiova sy ireo mpikambana ao amin'ny Foko. Tahina nanoratra hoe:
Natombokay tamin'ny bilaogy madinika ao amin'ny Twitter izany.
Anisan'ireo mpanao gazety liana tamin'ny atrikasa i Ando. Ity ny lahatsary misy azy milaza ny heviny momba izany.
Rehefa avy nilaza tamin'izy ireo ny fahalalàna fototry ny Twitter sy ny fampiasana azy izahay, dia nilaza tamin'izy ireo fa azo atao ihany koa ny misioka avy amin'ny finday. Fitaovana tena ilaina ho an'ny mpitati-baovao amin'ny tranonkala. Niezaka nampifanaraka ny findain'izy ireo amin'izany izahay saingy lafo be ny mametraka izany. In-dimy avo heny amin'ny vidin'ny eo an-toerana ny vidin'ny SMS iraisam-pirenena ary mbola olana lehibe ao amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana tahaka an'i Madagasikara izany
Nanoratra momba ny Tanà miblaogy (Tanà blogging) – fivorian'ny bilaogera avy ao Antananarivo, renivohitr'i Madagasikara i Ariniaina:
Raha ny marina, dia “Tanà miblaogy” faha-dimy ity saingy voalohany natrehin'ny namako sy ny tenako. Tsara ny fahitako izany voalohany satria nahafinaritra ny resaka tamin'izany.
Nisy ireo endrika vaovao sambany hitako: Tattum, Tony Rakoto sy Elsifaka. Faly mahafantatra anareo ry namana.
Namariparitra ireo bilaogera tamin'ny fihaonana i Tattum. Tamin'ity fihaonana ity, nanararaotra izany ny bilaogera mba hizara ny traikefan'izy ireo momba ny bilaogy. Tahina nanoratra hoe:
Ny ampahany tena nahaliana ahy indrindra dia tsy isalasalana fa ny fizaran'izy ireo ny traikefa nandritra ny krizy ara-politika mitohy. Ny zava-tsarotra tsy maintsy atrehin'ny bilaogera rehefa ao amin'ny tranonkala.
Lova Rakotomalala nanoratra ny antsipirihany mikasika ny fisoloan-tenan'ny Foko Madagasikara tamin'ny Fihaonambe Soul of the New Machine Human Rights tany New York. Hoy izy:
Ny asa voalohan'ny Foko dia mandrakitra ny fiainana andavan'andron'ny olom-pirenena Malagasy sy ny mpiasa misahana ny fiovana ara-tontolo iainana eo an-toerana, fa tsy mitanisa izay mety ho fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny governemanta. Na izany aza, tsy afa-miala amin'ny fitantarana ny krizy misy ankehitriny izy ireo.
Tahina, iray amin'ireo mpitantana ny sehatra Foko Ushahidi niresaka momba ny tontolon'ny tetikasa tamin'ny resadresaka niarahana tamin'i Solana Larsen ao amin'ny Global Voices Online.
Graffiti eo amin'ny rindrina. Sary avy amin'i Tahina
Nandefa ny sasany tamin'ireo graffiti ao Madagasikara i Tahina ary niresaka tamin'ny mpanakanto graffiti iray ihany koa izy. Ariniaina indray nandefa sary sasany ao amin'ny valam-biby Tsimbazaza rehefa avy nitsidika izany.
Diana mamariparitra momba ny fiara nipoaka teo anoloany izay anisan'ny herisetra ao anatin'ny fitokonana ao Madagasikara.
Raha te hahalala bebe kokoa, araho ny Bilaogy FOKO sy ny Twitter FOKO.